I-Best EZER Flu & Covid-19 Antigen Duo test okusheshayo Ukukhiqiza neFektri | UGenesise
Ukuhlolwa okusheshayo kwe-EZER Flu & Covid-19 Antigen Duo
U-EZERTM I-Flu & COVID-19 Antigen Duo Rapid Test yenzelwe ukuthola ikhwalithi kanyekanye nokwehlukanisa kwama-antigen e-nucleocapsid protein avela kwaSARS-CoV-2, umkhuhlane A nomkhuhlane B ezibonelweni eziqondile ze-nasopharyngeal (NP). Ukutholwa kususelwa kuma-antibody akhiwe ngokukhethekile abona futhi asabela nge-nucleoprotein yegciwane.
Izimpawu nezimpawu zomtholampilo zokutheleleka ngegciwane lokuphefumula ngenxa ye-SARS-CoV-2 nomkhuhlane kungafana. I-SARSCoV-2, umkhuhlane A kanye nomkhuhlane B ama-antigen wegciwane ngokuvamile atholakala kuma-specimens aphezulu okuphefumula ngesikhathi sesifo esibi.
Igciwane lomkhuhlane lingelomndeni we-Orthomyxoviridae, kanye nama-virus e-RNA ahlaselwe ngumzimba owodwa. Lapho igciwane lomkhuhlane i-A ne-B yigciwane eliyinhloko elinezifo ezinzima kubantu nasezinhlotsheni eziningi zezilwane. Ngokuya ngophenyo lwamanje lwezifo, isikhathi sokufukamela yizinsuku ezi-1 kuye kwezi-4. Ukubonakaliswa okuyinhloko kufaka phakathi umkhuhlane omkhulu, ukugula okujwayelekile kanye nezimpawu zokuphefumula. Womabili la magciwane ohlobo A no-B angazungeza ngasikhathi sinye, kepha imvamisa uhlobo olulodwa ludlangile phakathi nenkathi enikeziwe
I-COVID-19 iyisifo esithathelwanayo sokuphefumula esibi. Abantu bavame ukuthambekela. Njengamanje, iziguli ezitheleleke nge-coronavirus yenoveli zingumthombo oyinhloko wokutheleleka; abantu abangenwe yigciwane bangaba futhi umthombo othathelanayo. Ngokuya ngophenyo lwamanje lwezifo, isikhathi sokufukamela izinsuku ezi-1 kuye kwezingu-14, ikakhulukazi izinsuku ezi-3 kuye kwezi-7. Ukubonakaliswa okuyinhloko kufaka phakathi umkhuhlane, ukukhathala nokukhwehlela okomile. Ukucinana kwamakhala, ikhala eligobayo, umphimbo obuhlungu, i-myalgia nohudo kutholakala ezimweni ezimbalwa.
U-EZERTM I-Flu & COVID-19 i-Antigen Duo Rapid Test wukuthola ikhwalithi kanyekanye nokwehlukanisa kwama-antigen e-nucleocapsid protein avela kwaSARS-CoV-2, umkhuhlane A nomkhuhlane B ezibonelweni eziqondile ze-nasopharyngeal (NP).
Umkhawulo Wokuthola (LoD)
Inoveli yeCoronavirus ka-2019: 74.8 TCID50/ ml
Uhlobo Lomkhuhlane Wamagciwane
I-A / New Caledonia / 20 / 1999_H1N1
I-A / PR / 8 / 34_H1N1
I-A / Go-headed Goose / QH / BTY2 / 2015_H5N1
Ukuzwela Okuhlobene: 86.8%
Imininingwane Ehlobene: 94%
Ukuzwela Okuhlobene: 91.7%
Imininingwane Ehlobene: 97.5%
Ukuzwela Okuhlobene: 96.6%
Ukucaciswa Okuhlobene: 100%
Amadivayisi wokuhlola 20 izivivinyo
Ama-swabs angenanzalo Ama-20 ama-PC
Amashubhu okukhipha (anesizinda esingu-0.5mL Ama-20 ama-PC
isikhumbuzi sesikhashana) Ama-20 ama-PC
Umbhobho onesihlungi Ama-1 ama-PC
Ukuma kwe-Tube Ama-1 ama-PC
U-EZERTM Umkhuhlane & COVID-19 Antigen Duo
Langaphambilini I-china wholesale Point Of Care Yamangqamuzana Okuxilonga Ama-Pricelist - KaiBiLi Viral Transport Medium - Genesis
Olandelayo: EZER TB MPT64